Mayelana NATHI | Jiangsu Bornsun Medical wensimbi Co., Ltd.
Umsebenzi Wezempilo Osezingeni Elifanele
Jiangsu Bornsun Medical wensimbi Co., Ltd. kuyinto nomkhiqizi ehamba phambili imikhiqizo yezokwelapha izinga, eyasungulwa ngo-2015.
Jiangsu Bornsun Medical wensimbi Co., Ltd. ingumkhiqizi oholayo wemikhiqizo yezokwelapha esezingeni eliphakeme, eyasungulwa ngo-2015. Umndeni wethu womkhiqizo uhlanganisa ukuphathwa komoya, ukuphefumula, ukuvuselelwa / ukungena komoya, ukulethwa komoya-mpilo nemikhiqizo yokunakekelwa kokuhlinzwa. Kutholakale eWuxi Jiangsu enhle yaseChina, iBornsun ifaka indawo yokugcina impahla nokusabalalisa, indawo yokukhiqiza, igumbi lokuhlanza kanye namahhovisi okuphatha abasebenzi abangaphezu kwama-50. Sakha futhi senze imikhiqizo yethu, singaphendula ngempumelelo kuzidingo ezishintshayo zamakhasimende ethu, abahlinzeki, kanye nemakethe yezokunakekelwa kwempilo. E-Bornsun, wonke umuntu osebenzayo uzimisele futhi ukulungele ukusiza lapho edingeka khona kakhulu. Nesimo sengqondo esihle, sisebenza ndawonye ekuphenduleni ngempumelelo futhi ngokushesha kumakhasimende ethu, ophathina bebhizinisi kanye nomunye nomunye. Siyaqonda ukuthi ukusebenzisana kuyisihluthulelo samandla ethu okubhekana nezidingo zamakhasimende ethu kanye nezidingo zochwepheshe bezokunakekelwa kwezempilo.
Jiangsu Bornsun Medical wensimbi Co., Ltd. benza ucwaningo lwedivayisi yezokwelapha, ukukhiqiza nokumaketha. Ithimba le-R & D eliholwa yi-MD nonjiniyela abaphezulu banamathela kwezimakethe, isayensi nobuchwepheshe njengesiqondiso, bahlala bethuthukisa imikhiqizo esezingeni eliphakeme. ukuhlangabezana nezidingo ezikhethekile zokuphefumula, i-anesthesiology kanye nabahlengikazi bezimo eziphuthumayo.
Imikhiqizo yokuphefumula: imaskhi ye-oxygen, imaski ye-nebulizer, i-nasal oxygen cannula, ishubhu yokuxhuma, i-catheter yokudonsa, i-catheter yokudonsa evaliwe, uhlelo lokuphatha indle, isikhwama sokucindezela ukumnika, isikhwama somchamo, i-liner yokudonsa, ithumbu lesisu.
Sinezindawo ezingama-5000㎡ultra-cleansing / sterole and 2000㎡office-building and warehouse. Izinto ezisetshenziswayo ekukhiqizeni nasekupakisheni zikhethwe ngokukhethekile ukuhlinzeka umkhiqizo ngekhwalithi edingekayo ukuze usebenze ngempumelelo ngaphakathi kohlobo lwezicelo zemitholampilo ezifunayo. I-Bornsun iyakwazi ukusebenzisa ubuchwepheshe obuthuthuke kakhulu kulayini wokukhiqiza, ukuqasha abantu abafundile nabaqeqeshiwe ukukhiqiza kanye nabacwaningi mabhuku abangochwepheshe bokulawulwa kwekhwalithi, nokusungula indawo enelisekile yokukhiqiza yokukhiqiza, ukupakisha nokuhlanza inzalo. Sinesikhathi sokudiliva esisheshayo kuzinsuku eziyi-15-45days.izidingo ezikhethekile ezinganikezwa. Sinezitifiketi ze-CE ne-ISO13485.
Iqembu lethu lobunjiniyela lobuchwepheshe lizohlala likulungele ukukusebenzela ukubonisana nempendulo. Siyakwazi futhi ukukunikeza ngamasampuli wamahhala ngokuphelele ukuhlangabezana nezidingo zakho. Imizamo emihle kakhulu izokhiqizwa ukukunikeza insizakalo ekahle kanye nezimpahla. Noma ngubani ocabanga ngenkampani yethu nokuthengiswayo, sicela uxhumane nathi ngokusithumela ama-imeyili noma usithinte ngokushesha. Njengendlela yokwazi ukuthengiswa kwethu nokuqina. okuningi, ungafika efektri yethu ukuzokuthola. Sizohlala samukela izivakashi ezivela emhlabeni wonke ebhizinisini lethu ukwakha ubudlelwane benkampani nathi.